VaObama Vanowedzera neGore Zvirango Zvakatemerwa VaMugabe neVamwe Vavo muZanu PF
Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, vawedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nevamwe vavo vari muZanu PF nemuhurumende.
Muzvare Takudzwa Sayi Vofarira Bhavhadheyi Ravo
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTampa, Florida muAmerica chinoti chiri kufara nekuwana mukana wekupemberera bhavhadheyi rake, sezvo akaberekwa musi wa Kukadzi 29.
Kukadzi 18, 2016
VaCharamba Vanoti America Iri Kuvhiringidza Chirongwa cheZimbabwe
VaCharamba vati kaviri kese mari yainge yabhadharwa kune imwe kambani yakavharirwa mune rimwe banga rekuGermany nekuda kwezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica.
Western Global Airline Yotaura Zvichitevera Kuwanikwa kweMutumbi Mundege Yayo muHarare
Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vanoti mapurisa ari kuenderara mberi nekuongororara nyaya yemunhu akawanikwa akafa mundege yakamhara panhandare paHarare International Airport nemusi weSvondo.
Veruzhinji Vokurudzira VaMugabe Kuvaka Hukama Hwakanaka neAmerica Vanoongorora zvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vanoti mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, vanofanira kuregedza nyaya yavo yekushoropodza nyika dzakaita seAmerica nekuda kwezvirango zvehupfumi zvavakatemerwa nenyika idzi vachiti VaMugabe vanofanira kuita zvinodiwa kugadzirisa hukama hwavo nenyika idzi.
Kukadzi 15, 2016
Ndege yeWestern Global Airlines Yowanikwa Iine Mutumbi neMari Yakawanidisa
Pane ndege yekuAmerica yakabatwa paHarare International Airport neSvondo manheru nevanowona nezvemuchadenga veCivil Aviation Authority of Zimbabwe mushure mekuwanikwa iine mutumbi wemunhu pamwe nemari yakawanda.
Kukadzi 05, 2016
VaObama Vanoshanyira Chechi yeIslamic Society muBaltmore
Mutungamiri wenyika ye America, VaBarack Obama, vakakurudzira kubatana kwevana veAmerica, pavakashanyira chechi yechitendero che Islam muBaltimore, Maryland neChitatu.
Kukadzi 02, 2016
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti Zimbabwe iyo ine nzara inotyisa uye iri kutadza kubhadhara vashandi haifanire kungomhanyirira kuti iri kuda kubhadhara zvikwereti vanhu vachinonga svosve nemuromo.